Clinton oo arrimaha canshuurta ku weerartay Trump - BBC News Somali
Clinton oo arrimaha canshuurta ku weerartay Trump
Lahaanshaha sawirka EPA / AFP
Image caption Hillary Clinton iyo Donald Trump
Hillary Clinton ayaa weerartay Donald Trump, ayadoo ku tilmaantay inuu tusaale u yahay "hanaan wax ku shubasho", ka dib markii ay soo baxday in ay dhici karto inuusan canshuur bixin 18 sano.
Horraantii todobaadkan ayuu wargayska New York Times sheegay in Mr Trump laga yaabo inuu ka dhuuntay canshuur bixinta, ka dib khasaare ilaa 1 Bilyan oo Doollar ku dhow oo uu galay 1995.
Laakinse maalqabeenkaas ka tirsan xisbiga Jamhuuriga wuxuu ku dhawaaqay Isniintii inuu si "xeelad leh" uga leexleexday hanaanka cakiran ee canshuuraha.
"xeerarka canshuuraha waxaan u fahamsanahay si ka wanaagsan sida dadka kale u fahamsan yihiin" ayuu yiri, wuxuuna intaa ku daray in uu "u isticmaalay shuruucda canshuuraha si ay isaga iyo shirkaddiisaba dan ugu jirto".
Xiisaddan canshuurta salka ku haysa ayaa la filayaa inay sii socoto ilaa iyo doodda Talaadada dhex maraysa labada murashax ee u tartamaya madaxweyne ku xigeennimada, Mike pence oo ka socda xisbiga Jamhuuriga iyo Tim Kaine oo ka socda xisbiga Dimoqaraadiga.
Saadaal ku salaysan afti dadka laga qaaday oo ay sameeyeen CNN/ORC ayaa muujinaysa in Mrs Clinton ay horumar ka samaysay dooddii labadooda dhex martay. Ku dhawaad afar meelood oo seddax meel dadkii ra'yiga laga uruuriyey ayaa sheegay in Mr Trump uu soo bandhigo canshuur celinta.